ओलीकाे दाऊ निर्वाचनतिरः खनाल–नेपाल धर्मसंकटमा, २७ गते एमाले विभाजनको छिनोफानो हुने - नेपालबहस
ओलीकाे दाऊ निर्वाचनतिरः खनाल–नेपाल धर्मसंकटमा, २७ गते एमाले विभाजनको छिनोफानो हुने
| १३:२८:४२ मा प्रकाशित
२१ बैशाख, काठमाडौं । सत्तारुढ दल एमालेभित्र आन्तरिक द्धन्द बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अचानक विश्वासको मत लिन संसद अधिवेशन आह्वान गरेपछि पार्टीभित्रको स्थायी प्रतिपक्ष माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्ष धर्मसंकटमा परेको छ ।
एउटै पार्टीभित्र पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कट्टर आलोचक रहेको सो पक्षले वैशाख २७ गते ओलीलाई विश्वासको मत दिन्छन् वा फ्लोर क्रस गरेर सरकार ढाल्न सहयोगी बन्छन् भने कौतुहलताकाबीच उनीहरु धर्मसंकटमा परेका हुन् । ओलीले विश्वासको मत लिन २७ गतेलाई संसद आह्वान गरेपछि माधव–झलनाथ पक्ष छलफलमा जुटेको छ ।
पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत पार्टी गतिविधि अघि बढाएपछि माधव–झलनाथ पक्षले देशैभर समानान्तर कमिटी बनाएर गतिविधि गरिरहेको बेला ओलीले माधव नेपाल लगायतका चार जनालाई पार्टीबाट ६ महिनाका लागि निलम्बन गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा सो पक्षले ओलीकाे पक्षमा मतदान गर्छ या विपक्षमा भन्ने चासो सर्वत्र चासो बढेको छ । तर उनीहरुले के गर्ने ? मतदान गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा कुनै विचार बाहिर ल्याएका छैनन् ।
झट्ट हेर्दा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध खुलेरै लागेको माधव–झलनाथ समूहलाई विश्वासको मत दिइहाल्ने निर्णय गर्न त्यति सहज छैन । ओलीले पार्टीभित्र छिर्नबाट रोक लगाएपछि माधव नेपाल तथा झलनाथ खनाल पक्ष अहिले बाहिरै बसेर पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने भन्दै समानान्तर कमिटी बनाइरहेका छन् ।
‘हामीले आन्तरिक र कानुन व्यवसायीसँग छलफल थालेका छौं, राजनीतिक विषय भएकाले निर्णय गर्न समय लाग्छ । तर विश्वासको मतको प्रसंगमा अर्को रणनीति बनाउनु आवश्यक छैन । अब के हुन्छ हेरौं, एक दुई दिन कुरौं,’ खनाल– नेपाल पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने । ओलीलाई उनीहरुको समूहले विश्वासको मत नदिए पार्टी विभाजनको औपचारिक शुरुवात त्यसै दिनबाट हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने भएपछि सरकारको सिफारिसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि यही वैशाख २७ गते दिउँसो १ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक डाँकेकी छन । सम्भवतः २७ गते अगाडि नै ओलीले संसदीय दलको बैठक राखेर विश्वासको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गर्नेछन् ।
ह्विप माधव–झलनाथ पक्षले पालना गर्छ वा गर्दैन, त्यो आगामी सोमबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमै थाहा हुने एमाले ओली पक्षका एक नेताले बताए । पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्ने सांसदलाई बर्खास्त गर्ने तयारी ओलीले गरिसकेका छन् । ओलीले माधव नेपालसहितका २७ जनालाई यसअघि नै स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् ।
यद्यपि थप कारबाही भने गरेका छैनन् । ओली समूहले नेपाल पक्षलाई कारवाही गरेर अघि बढ्न खोजिरहेको र सरकार ढल्ने अवस्था आए नेपाल पक्षलाई कारवाही नगर्ने मनस्थिति बनाएको स्रोतको दावी छ । एमालेको माधव–झलनाथ पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टी विभाजन गर्न नहुने मत राख्दै आएकाले २७ गते ओलीलाई विश्वासको मत दिने संभावना पनि उत्तिकै रहेको छ ।
तर यो अवस्थामा आइपुग्न ओलीले फागुन २८ गते नेपाल पक्षलाई पार्टीबाट बाहिर राख्ने निर्णय सच्याउनु आवश्यक छ । तर ओली फागुन २८ गतेको निर्णयबाट बाहिर बस्ने संभावना निकै कम रहेको छ । सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलापछि एमालेलाई ०७५ जेठ २ मा लग्नुपर्छ भन्ने नेपाल पक्षको मागलाई ओलीले वेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको परीक्षण गर्न लागेकाले प्रधानमन्त्री ओली, माधव नेपाल, विपक्षी दल माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको परीक्षण अब त्यही हुने ओली पक्षका नेताहरुको दावी रहेको छ ।
विश्वासको मत लिने निर्णय भएपछि माधव–झलनाथ पक्षमा पनि प्रस्ट धारणा आउनेमा ओली पक्षका नेताहरुको भनाई रहेको छ । माधव–झलनाथ पक्षीय एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार एमाले हुन पाउनुहुन्न भनेर ओलीले ढोका थुनेको र पेलेरै जाने हिसाबले अघि बढेका कारण परिस्थिति जटिल बन्दै गएको छ । ती नेताले आफूहरूको टाउका गनेर भोट चल्ने तर मानिसचाहिँ काम नलाग्ने अवस्था देखिएको दावी गर्छन ।ओली सच्चिनुपर्छ भन्ने नै उनीहरुको माग छ ।
लामो समयदेखि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै आइरहेका दलले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने रणनीति बनाइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले नै संसदमा विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । संविधानको धारा १०० को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि संसदको विश्वास छ वा छैन भन्ने यकिन गर्न जुनसुकै बेला विश्वासको मत लिन सक्ने व्यवस्था छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा अहिले २७१ सांसद बहाल छन् ।
माओवादी केन्द्रले आफ्ना चार जना सांसदलाई कारबाही गरेपछि उनीहरूको सांसद पद गुमेको छ । हाल कायम सांसद संख्याको आधारमा बहुमतका लागि १३६ सांसद आवश्यक पर्छ । तर, ओली एक्लैसँग बहुमत पुग्दैन । उनको पार्टी एमालेका १२० सांसद छन् । सिंगो एमाले एकमत भए पनि ओलीलाई बहुमतका लागि थप १५ सांसद आवश्यक पर्छ ।
जसपाको एउटा समूहले भए पनि समर्थन दिएमा सरकार यथावत् रहन सक्छ । तर, एमाले कानुनी रूपमा एकै भए पनि राजनीतिक रूपमा विभाजित अवस्थामा मै छ । कर्णाली प्रदेशमा एमालेको माधव पक्षीय चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेर माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाहीको सत्ता जोगाइदिएपछि ओली अहिले निकै अप्ठ्यारोमा छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै विश्वासको मत आर्जन नगरेमा संविधान अनुसार नै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर निर्वाचनमा जाने तयारी गरेका छन् ।संसदमा रहेका दलमध्ये अहिले जसपाका महन्थ ठाकुर तथा राजेन्द्र महतो समूहले ओलीलाई समर्थन गर्ने अवस्था छ भने उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई समूहले समर्थन गर्ने अवस्था छैन ।
ओलीलाई विश्वासको मत लिन १ सय ३७ सांसद आवश्यक हुन्छन् । अहिले प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सदस्य छन् । तीमध्ये कांग्रेसका ६० र माओवादीका ४९ जना छन । माओवादीले एमालेमा गएका चारजनालाई पदमुक्त गरेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टीका ३२, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा र स्वतन्त्र हैसियतका एकएक जना सांसद छन । सरकारले बजेट ल्याउनु अघि नै संसदबाट विश्वासको मत लिएमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास हुनेमा शंका नहुने भएकाले पनि ओलीले सुरुमै विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार विश्वासको मत प्राप्त नभएमा ओली काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री हुनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा अर्को सरकार नबन्दासम्म ओली नै सरकारमा रहने भएकाले संविधानले तोकेका सबै प्रक्रिया पूरा हुँदा पनि नयाँ सरकार बन्ने अवस्था नआउने भएपछि संविधानअनुसार नै ओलीले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने स्रोतको दावी छ । आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन गराउने ओलीको दाउ छ । यस्तो अवस्थामा खनाल– नेपाल पक्ष धर्म संकटमा परेको छ ।
एमाले कार्यदलको बैठक आज बस्दै २१ मिनेट पहिले
ओलीको सपथविरुद्ध परेका रिट प्रधानन्यायाधीश आफैंले हेर्ने ३१ मिनेट पहिले
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा ६ घण्टामा ४ संक्रमितको मृत्यु ३२ मिनेट पहिले
टोखालाई ३ थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहयोग ३६ मिनेट पहिले
संसदबाट नीति कार्यक्रम पास नुहुने र वैकल्पिक सरकार पनि नबन्ने देखियो: भट्टराई ४९ मिनेट पहिले
कर्णालीमा एक करोड राशिको पत्रकार कल्याण कोष ५२ मिनेट पहिले
पाँचथरमा जेठ १७ गतेसम्म निषेधाज्ञा ६० मिनेट पहिले
निषेधाज्ञामा पनि ‘राधे’ को ‘फस्ट डे फस्ट शो’ हेर्न पाइने ६ दिन पहिले
एक महिनामा कोरोनाबाट सुदूरमा २५९ जनाको मृत्यु २ दिन पहिले
अनुमति बिना जथाभावी सालको रुख कटान ७ दिन पहिले
अक्सिजन आपूर्ति सहजीकरणका लागि मोबाइल हटलाइन नम्बर ४ दिन पहिले
तनहुँको पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरमा प्रवेश रोक २ हप्ता पहिले
नुवाकोटमा दैनिक सातसय सिलिण्डर अक्सिजन उत्पादन २ हप्ता पहिले
दुई वाणिज्य बैंकको शेयर कारोबार रोक्का ४ दिन पहिले
सुनको मूल्य तोलामा ९ सय रुपैयाँ घट्यो १ वर्ष पहिले
वामदेवलाई मन्त्री नबनाउन भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा ८ महिना पहिले
महामारीको जोखिममा एचआइभी संक्रमित २ हप्ता पहिले
बुधवार यी चार कम्पनीको शेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट, प्रतिशेयरमूल्य कति ? १ महिना पहिले